Atrikasa « Valiha Mikalo » : « Azo atao ny mitendry valiha miaraka amin’ny solfezy » | NewsMada
Atrikasa « Valiha Mikalo » : « Azo atao ny mitendry valiha miaraka amin’ny solfezy »
Anisan’ny zavamaneno mampiavaka ny Malagasy ny valiha. Tao anatin’ny taona maromaro anefa izay, nihazakazaka be ny asa fikarohana momba ity zavamaneno ity sy ny fomba fampiasana azy. Iray amin’ireny ny nahafahana mitendry valiha miaraka amin’ny solfezy. Zavamaneno toy ny zavamaneno rehetra ny valiha, noho izany, azo atao tsara izany.
Ny valiha, hay ny mitendry azy ny solfezy, hay ihany koa ny mamaky azy ! Tafiditra ao anatin’ny fampivelarana ny kolontsaina malagasy, hanatanteraka atrikasa maimaimpoana ao amin’ny Cercle Germano-Malagasy (CGM) tohatohabaton’Antaninarenina ny Ako Miantefa ny 11 ka hatramin’ny 15 jolay izao. « Valiha Mikalo » ahitana fampianarana mitendry valiha miaraka amin’ny solfezy. « Fahaizana roa sosona no ho azon’izay manatrika azy ity satria ny valiha hay ny mitendry azy ny solfezy hay ihany koa ny mamaky azy », hoy ny tompon’andraikitry ny fampianarana. Ankoatra io fampianarana mitendry valiha io, haseho ho hitan’ny mpiofana ihany koa ny fomba fanamboarana valiha. Amin’ny maha atrikasa azy rahateo, azo atao ny mitafa mivantana amin’ireo mpampiofana sy mpikarakara ny hetsika « Valiha Mikalo ». Ny zoma 15 jolay tolakandro, hofaranana amin’ny fampisehoana an-tsehatra ao amin’ny Cercle Germano-Malagasy ihany ny atrikasa.
Hisy fampirantiana hanamafy ny « Nahita ny very »
Ho an’ny Ako Miantefa, tsy ao anatin’ny vanim-potoana « Mitady ny very » tanteraka intsony ny Malagasy izao fa efa misy ny hita. « Efa « Nahita ny very » isika, noho izany, ilaina ny mampahafantatra azy ireny (ireo very ka efa hita) ho an’ny Malagasy rehetra sy ho an’izao tontolo izao », hoy hatrany Rasetamalala, filohan’ny Ako Miantefa.
« Amin’ny maha mpanao tantara an-tsary sy mpikajy ny rakitry ny ela ary mpikaroka azy, haneho zavatra maromaro (fiavian’ny mponina tany Anôsy, ireo mpitendry valiha malaza, feom-baliha manerana ny Nosy… » Rakotondrazafy Gérard (Zokibe Zézé), mpikambana mpanorina ny Ako Miantefa. Fantatra fa hitohy hatrany ny ezaka fampahafantarana ny kolontsaina malagasy ataon’ity fikambanana ity.